Dowladda Soomaaliya oo u yeertay Safiirka Kenya ee Muqdisho | Somsoon
Home WARAR Dowladda Soomaaliya oo u yeertay Safiirka Kenya ee Muqdisho
Dowladda Soomaaliya oo u yeertay Safiirka Kenya ee Muqdisho
Dowladda Soomaaliya yaa u yeertay Safiirka Dowladda Kenya u fadhiya magaaladda Muqdisho waxayna u dhiibtay cabasho ka dhan diyaar laga leeyahay Kenya oo ku xad-gudubtay hawada Soomaaliya.
War kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Wasiiru Dowladaha Wasaradda Cabdulqaadir Axmed-Khayr uu qaabilay Safiirka Kenya Lucas Tumbo islamarkana uu u dhibay Cabasho ka dhan ah diyaarad 5-tii bishaan fasax la’aan ku degtay magaaladda Kismaayo.
“Soomaali si adag ayey u diidantahay xad gudubkaan mana aqbali doonto xad gudub ka dhan ah xuduudaheeda dhulka, hawada iyo badda, waxayna ugu baaqaysaa Kenya in ay kasoo jawaabto xad gudubkaas xilli ciidankeedu joogaan gobolka Jubada Hoose iyagoo qayb ka ah AMISOM” ayaa lagu sheegay Warka Dowladda Soomaaliya.
Warka Soomaaliya oo u muuqda mid ku qoran luuqad adag ayaa muujinaya in ay xiisad cudub ka dhex dilaacday dalalka Soomaaliya iyo Kenya.
Waa markii ugu horeeysay ee Dowladda Soomaaliya ay si rasmi ah uga hadasho Diyaarad jabisay amarkii Dowladdu ku soo rogtay diyaaraha tagaya magaaladda Kismaaayo islmarkaana magaaladaas geysay rakaab ay kasoo qaaday Nairobi iyo Garowe.
“Dowladda federalka ah ee Soomaaliya waxay u aragtaa falkaas in uu yahay mid kasoo horjeeda dhamaan mabaadii’ada deris wanaaga iyo in aan la fara gelin arrimaha guda ee wadan” ayaa sido lagu lagu sheegay Warka ay soo saartay Dowladda Soomaaliya.
Majiro weli war kasoo baxay Dowladda Kenya oo ku saabsan cabashadda ay u gudbisay Soomaaliya.
Article horeSawirro: Axmed Madoobe oo helay taageero ka difaaci karta dagaalka siyaasadeed ee Dowladda Dhexe
Article socoda Dowladda Norway oo deyn cusub siineysa Soomaaliya